I-Wholesale 2pcs 17pcs General Sideless Faux Isikhumba Esiphansi Isembozo Sesihlalo Semoto Samaloli Abakhiqizi nabaphakeli |Izesekeli zomholi
I-2pcs 17pcs General Sideless Faux Isikhumba Esiphansi Isembozo Sesihlalo Semoto Yamaloli e-SUV
Kokubili amakhava ezihlalo zangaphambili zesikhumba ezingu-2 nama-pcs angu-17 nezihlalo zesikhumba ezingama-17 isethi egcwele uyazikhethela lapha, ukuba nesembozo sezihlalo kuyindlela enhle yokuvikela imoto yakho uma unezingane, izilwane ezifuywayo, noma uma ujima noma imisebenzi yangaphandle.Izesekeli Zokuhola Izembozo ezijwayelekile zezihlalo ezingemuva ziyakwazi ukususa ukungcola nezinye izinto ezingcolile ezihlalweni zakho ezihlanzekile, ngaphandle kwalokho, zikhulula ukugeleza komoya, okuvumela isikhumba sakho ukuba siphefumule futhi kwenze ukushayela kwakho kujabulise wena nabagibeli bakho.
Into NO.: 10203079, 10203080, 10203174, 10203202, 10203203, 10203205
Umbala: Okumnyama, Okumpunga, Oku-Beige
I-Van, i-SUV, i-sedan, njll.
Isethi: 17 ama-pcs
● Idizayinelwe ukuthi ilingane nezihlalo eziningi, amakhava enziwe ngesikhumba esiqinile, esinezimbobo, nesiphefumulayo esinegwebu elingu-3 mm.
● Sicela uqiniseke ukuthi ama-headrest akho ayahlukaniseka futhi ama-airbag akho aseceleni ahambisana nesembozo sethu sesihlalo ngaphambi kokuyithenga.
● Oziphu abangu-3 bekhava ye-backrest bavumela ikhava ukuthi ithwale ukuhlukaniswa okungu-60/40, ikhava engezansi ayinawo uziphu, isembozo sesihlalo esingemuva sesikhumba sivumela i-backrest, i-armrest emaphakathi, nesibambi senkomishi ukuthi zehle ngokuqaqa uziphu.
● Amakhava ezihlalo zangemuva ahlukaniswe ngesikhumba, aklanyelwe ukubamba izihlalo zemoto yezingane/zezingane, akuvumela ukuthi usebenzise ngokugcwele ibhande lesihlalo sangemuva noma ihange elakhelwe ngaphakathi ngemuva kwe-backrest engezansi, ngaphandle kwalokho, sithatha ibhande eliqinile. kunebhande elinwebekayo elenza kube lula ukungena ngaphansi kwesihlalo ukuze ufake ikhava.
● Izingcezu eziyi-17 isethi egcwele ihlanganisa:
- 2 ama-pcs isembozo sesihlalo sangaphambili
- Ikhava ye-backrest eyi-1 pc
- 1 pc isihlalo esingemuva umcamelo
- Ikhava ye-headrest yama-5 ama-pcs
- 1 pcs ikhava yesondo lokuqondisa lomhlaba wonke (14.5-15.5 amayintshi)
- 4 ama-pcs ehlombe pads
- 2 ama-pcs air fresheners
- 1 pc indwangu mesh
● Izingcezu ezi-2 zesembozo sezihlalo zangaphambili isethi ihlanganisa 2 izihlalo zangaphambili.
Indwangu enwebekayo namabhande alungisekayo alezi zihlalo ze-Leader Accessories 2pcs/17pcs awenzi nje ukufaka nokususwa kalula, kodwa enza kube nokwenzeka ukulingana cishe zonke izimoto, amaveni, nama-SUV, njll.
Qaphela: Sicela uqinisekise lokhoisihlalo sakhos ziyahambisana namakhava ezihlalo zethungaphambiliukuthenga le 2pcs lesikhumba isethi ikhava izihlalo zangaphambili noma 17pcs lesikhumba isihlalo ihlanganisa isethi egcwele.
Umzimba wakho ujwayele ukukhathala uma ushayela ngaphandle kwesembozo sesihlalo, futhi, ukushayela amabanga amade kuzokukhathaza kancane uma ungenayo isembozo sesihlalo esihle.
Indwangu yesikhumba sethu esinezimbobo ezisezingeni eliphezulu iqukethe izendlalelo ezi-3, isikhumba esiyi-faux + 3 mm i-foam padding + esekelayo, ethambile, ephefumulayo futhi egqoke kanzima, kulula ukuyihlanza, futhi ukwakheka okusha kuphakamisa isitayela semoto yakho phezulu.
Qaphela: kungcono ukusula futhi umoya wome.
-Izinzuzo zokuba nesembozo sesihlalo
Isembozo sesihlalo esikahle asikwazi ukuvikela kuphela isihlalo sakho semoto ukuze ungashintshi isihlalo sakho esihlanzekile, kodwa wenze ukuhlanza kube lula, izihlalo zezimoto ze-Leader Accessories zizohlala isikhathi eside futhi zinikeze imoto yakho inani eliphakeme lokudayiswa kabusha, uma uneminyaka yobudala. imoto, izingane ezinomsindo noma izilwane ezifuywayo, ukuba nesembozo sezihlalo kuhlale kuwukukhetha okuhlakaniphile ukugcina izihlalo zemoto yakho zihlanzekile njengoba zikwazi ukuvikela othulini, ukungcola, udaka nokunye.
Okwedlule: Amabhayisikili angu-2 namabhayisikili angu-4 Isitayela Sensika Esigoqekayo Hitch Egibele Ibhayisikili Yesithwali Racks Yamaloli Amancane
Olandelayo: Ikhava Yesihlalo Semoto Engangeni manzi futhi Engasheleli Yeloli Le-SUV Sedan